RASMI: David Silva Oo Macasalaameeyey Manchester City Iyo Waqtiga Uu Baxayo Oo Uu Pep Guardiola U Sheegay | Laacibnet.net
RASMI: David Silva Oo Macasalaameeyey Manchester City Iyo Waqtiga Uu Baxayo Oo Uu Pep Guardiola U Sheegay
Ruug-caddaaga khadka dhexe ee David Silva ayaa u xaqiijiyey kooxdiisa Manchester City in dhamaadka xili ciyaareedka uu ka tegayo oo aanu wax gorgortan ah ka geli doonin inuu sii joogo Etihad Stadium.
Kubbad-sameeyaha reer Spain oo heshiiskiisa Manchester City uu ku egyahay June 30, ayaa soo afjaraya muddo toban sannadood ahayd oo uu joogay Etihad, waxaana aan la ogeyn kooxda uu tegi doono iyo waxa uu yahay qorshihiisa xiga ee aan ka ahayn inuu doonayo inuu kusii jiro ciyaaraha.
Silva ayaa la filayay inuu heshiis waqti kooban ah saxeexo oo uu illaa dhamaadka xili ciyaareedkan sii joogo, maadama ciyaaraha hakadka ku yimid ay sababayaan in Premier League uu sii socon doono illaa dhamaadka July ama horraanta August.
Taageereyaasha Manchester City ayaan garoon dambe ku daawan doonin laacibkan oo xidhan maaliyadda kooxooda, maadaama marka ay ciyaaruhu soo laabtaan lagu dheeli doono garoomo madhan oo aan loo ogolaan doonin inay cidi usoo daawasho tagto, waxaanu Silva bixi doonaa isaga oo aan helin sagootintii jamaahiirta ee ay ahayd inay garoonka usoo camiraan daraadii kulankiisa ugu dambeeya.
Tababare Pep Guardiola ayaa hore u sheegay inuu jeclaan lahaa in David Silva uu sannad kale sii joogo kooxda oo uu qandaraas cusub saxeexo, hase yeeshee, sida ay wargeysyada kasoo baxa magaalada Manchester qoreen, Silva waxa uu macallinka ay isku waddanka yihiin u sheegay in ay dhamaatay shaqadiisii oo uu tegayo, laakiin uu lasii joogi doono inta laga dhamaystirayo xili ciyaareedka.
Manchester City ayaa ku hawlan sidii ay u heli lahayd beddelka David Silva, waxaana Pep Guardiola uu uu isku dayayaa in Phil Foden uu galo kaalintiisii, hase yeeshee khibradda, tayada iyo farsamooyinak Silva ayey adag tahay in dhayal lagu helo.